အလုပ်အမှုဆောင်စီးပွားရေးပုဂ္ဂလိကဂျက် Air ကိုပဋိညာဉ်စာတမ်း Las Vegas မှ, Henderson, ငါ့ကိုအနီးနီဗားဒါးလေယာဉ်ငှားရမ်းခြင်းကုမ္ပဏီ 702-919-0800 ကော်ပိုရိတ်စီးပွားရေးသမားများအတွက်လက်ငင်းကိုးကားဗလာခြေထောက်ပျံသန်းမှုဝန်ဆောင်မှုများအတွက်, အရေးပေါ်သို့မဟုတ်ဖွင့်လှစ် deadhead ခြေထောက်လေယာဉ်ပေါ်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာတနင်္ဂနွေခရီးသွား? မှာ Call 702-919-0800, စီးပွားဖြစ်လေကြောင်းလိုင်းများပျံသန်း၏ထောငျခြောကျအခြို့ကိုရှောင်ရှားနေစဉ်သင်လျင်မြန်စွာသင့်ရဲ့ဦးတည်ရာကိုရနိုင်. သငျသညျလေယာဉ်ပျံဝန်ဆောင်မှုငှားရမ်းတဲ့အခါမှာ, သင်သည်သင်၏အချိန်ဇယားအပေါ်ပျံသန်းနှင့်မလေကြောင်းလိုင်း၏. သင်လေဆိပ်မှာဆိုက်ရောက်လာတဲ့အခါ, လှညျးစစ်ဆေးမှုများမှာရှည်လျားသောလိုင်းများကိုရှောင်ရှားနေစဉ်အတွင်းသင့်ပျံသန်းကိုစတင်, လက်မှတ်အရောင်း, သင့်ရဲ့လေယာဉ်လုံခြုံရေးနှင့် boarding.
ပြီးတာနဲ့ဇိမ်ခံလေယာဉ်ငှားရမ်း Las Vegas တွင် onboard ခရီးသည်သူတို့နှစျသိမျ့ဘို့ဒီဇိုင်းထုတ်တဲ့လေယာဉ်ပေါ်မှာသတိပြုပါ. အဆိုပါအဆင်ပြေထိုင်ခုံသူတို့ကိုဆန့ ်. နှင့်လေယာဉ်ပျော်မွေ့ရန်လိုအပ်ပါတယ်ခြေထောက်အခန်းပေး. စီးပွားရေးလုပ်ငန်းပျံသန်းမှုများအတွက်, ထိုပဋိညဉ်စာတမ်းဝန်ဆောင်မှုအပေါင်းအသင်းသူတို့ရဲ့ခရီးသွားလာအချိန်အများဆုံးလုပ်ပြတ်တောက်မပါဘဲစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအစည်းအဝေးများကျင်းပနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂလိက setting ကိုထောက်ပံ့ပေး. သင်တို့ပြေးမကြာခဏသငျ့အိမျနီးကပ်လာသည့်လေဆိပ်မှာသင်တက်ကောက်နှင့်သင့်ရာခရီးနီးတယောက်ရန်သင့်အားယူနိုင်ပါသည်, သင့်ရဲ့ခရီးစဉ်ကိုမြေပြင်ခရီးသွားများအတွက်လိုအပ်သောအချိန်လျှော့ချ.
ဘတ်ဂျက်သတိခရီးသွားတွေအနေနဲ့တတ်နိုင်ဗလာခြေထောက်သဘောတူညီချက်၏အားသာချက်ယူနိုင်ပါသည်. ဤရွေ့ကားအပေးအယူရိုးရာပဋိညဉ်စာတမ်းဝန်ဆောင်မှုထက်နည်းနည်းပိုပြီးပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်လိုအပ်, သင်သည်အခြားခရီးသည်များကောက်ယူဖို့လေယာဉ်ရဲ့ပြန်လာ၎င်း၏နေအိမ်လေဆိပ်မှခရီးစဉ်ဒါမှမဟုတ်လေယာဉ်ထွက်ခေါင်းနှစ်လုံးသည်အဘယ်မှာရှိတစ်ဦးအချည်းနှီးသောခြေထောက်အသုံးပြုနေသည်ကြောင့်သူတို့သည်သင့်ပိုက်ဆံကိုကယ်တင်. အချည်းနှီးသောခြေထောက်ဖျက်သိမ်းရေးပဋိညာဉ်စာတမ်းကိုဝန်ဆောင်မှုများအတွက် operating ကုန်ကျစရိတ်လျော့နည်းစေခြင်းနှင့်နေဆဲ Las Vegas မှာပုဂ္ဂလိကဂျက်လေယာဉ်စင်းလုံးငှားလေယာဉ်ခရီးစဉ်ဝန်ဆောင်မှု၏အကျိုးကျေးဇူးများမွေ့လျော်သောသူခရီးသည်မှပေါ်ဤအကြောင်းငွေစုသွားနိုင်, NV.
သင်အလင်းထဲကခရီးသွားလာသို့မဟုတ်ပျံသန်းဖို့ချင်တယ်ဆိုရင်ဒါဟာအရေးမပါဘူး, midsize, လေးလံသော, အလုပ်အမှုဆောင်လေကြောင်းလိုင်းများ, သင်လိုအပ်သည့်အခါတိုင်းသို့မဟုတ်သင်၏နောက်ခရီးပုဂ္ဂလိကလေယာဉ်တင်တာဘိုပရော့, 24/7. အကြှနျုပျတို့သညျသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကိုဖုန်းခေါ်ပေးမည်ကိုကူညီနိုငျ 702-919-0800
အခြားတည်နေရာကျနော်တို့ Las Vegas တွင်ဧရိယာဝိုင်းအမှုတော်ကိုထမ်းရွက်
Las Vegas မှ, နီဗားဒါး 89101
Las Vegas မှ, မြောက်ကိုရီးယား Las Vegas တွင်, အဆိုပါရအေိုငျမြား, Henderson, Nelly လေတပ်အခြေစိုက်စခန်းကို, အပြာရောင်စိန်, ကျောက်သားစီးတီး, ဂျင်း, အိန္ဒိယ Springs, Moapa, Overton, Searchlight, ဗိမာနျတျောဘားရှိ Marina, Logan Dale, Pahrump, တောင်ကြီးတောင် Pass ကို, Nipton, Dolan Springs, Meadview, မာကျူရီ, Cal Nev Ari, Tecopa, Shoshone, Bunkerville, ထိပ်တန်း, Bullhead စီးတီး, Mesquite, chloride, Laughlin, Amargosa ချိုင့်, ဝိန်း Fort အဘိဓါန် Mohave, မုန့်ဖုတ်သမား, Littlefield, ရွှေတောင်ကြား, Hackberry, Kingman, မိုးမခသဲသောင်ပြင်, GUNLOCK